सधैं आकाशमा उडिरहने राजु उड्दा उड्दै अ’स्ताए ! – Khabarhouse
सधैं आकाशमा उडिरहने राजु उड्दा उड्दै अ’स्ताए !
Khabar house | ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १२:१३ | Comments
पोखरा : सधैं आकाशमा उडिरहने राजु नेपाली उड्दाउड्दै अ’स्ताए। टेण्डम फ्लाइट उडान भर्दै आएका ३८ वर्षीय नेपालीले प्याराग्लाइडिङ उडानकै क्रममा ज्या’न गु’माए । उनको निधनले पोखराको प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रले अनुभवी पाइटल गुमाएको छ। कराँतेले अनुशासित खेलाडी, प्रशिक्षक एवं रेफ्री गुमाएको छ। शारीरिक सुगठनले पदक जित्ने सम्भावना बोकेको खेलाडी गुमायो।
जिम सेन्टरमै कराँते तथा किक बक्सिङ प्रशिक्षण समेत गराउँथे। जिमसँगै उनको यात्रा प्याराग्लाइडिङतर्फ मोडियो । प्यारा ग्लाइडिङमा टेण्डम उडान गर्न सक्षम भएपछि पाँच वर्षयता टेण्डम उडान गर्दै आएका थिए। उनले पोखराको फिष्टेल प्याराग्लाइडिङ कम्पनी मार्फत उडान भर्ने गर्थे। परिवारले अभिभावक गुमाए। आम्दानीको स्रोत गुम्यो। परिवारको आर्थिक अवस्थामा सामान्य छ। उनकै भरमा परिवार चल्थ्यो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।